Noocyada wareegyada korantada ee jira iyo wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato | Qalabka bilaashka ah
Noocyada wareegyada korantada ee hadda jira
Dad badan oo Qaybaha elektarooniga ah boggan, iyo sidoo kale maqaalo kale oo badan oo ku saabsan qalabka, softiweerka, mashaariicda, iwm. Waxa kale oo ay noqon laheyd mid xiiso leh in talaabo hore loo qaado lana muujiyo noocyada wareegyada korantada loogu talagalay dadka bilowga ah ee ka bilaabanaya adduunka korantada iyo korontada.
Nolol maalmeedka, qaar badan oo ka mid ah wareegyadan waxaa loo isticmaalaa iyada oo aan la ogeyn, laga bilaabo qalabka moobiilka ee aad isticmaasho maalin kasta, illaa markaad riixdo biiraha qolkaaga si aad u shiddo ama u demiso, u joojiso codsiyo kale oo badan. Si aad wax yar uga sii fahanto sida ay u shaqeyso intaas oo dhan, waxaan kugula talinayaa inaad akhriso hagahan ...
1 Waa maxay wareeg?
2 Waa maxay wareegga korantada?
2.1 Wareegga elektarooniga ah
3 Noocyada wareegyada elektiroonigga ah
Waa maxay wareeg?
Un wareegga Waa wax walba oo dhammaystiran oo xidhan ama jid ama wax ku wareegsan oo wax wareegaya. Tusaale ahaan, waxaad yeelan kartaa wareegga tartanka, kaas oo gawaarida tartamada ay ka wareegaan; Wareeg Haydarooliga ah, oo dheecaanka qaar wareegi doono; ama wareegga korantada, kaas oo korantadu ku wareejiso.
Si aad awood ugu yeelatid wareejinta, waxaad u baahan tahay a dhexdhexaad dhexdhexaad ah, marka lagu daro walxo taxane ah oo u oggolaanaya. Tusaale ahaan, wadada orodka waxaad u baahan doontaa waddo, midka hydraulic-ka waxaad u baahan tahay marin biyood, iyo mid koronto oo ah kirishbooy qaada dusha hadda.
Waa maxay wareegga korantada?
Haddii aan diiradda saarno a wareegga korantada, waa jidkaas ama dariiqa ay marayaan koronto hadda socota. Wadadani way ka sii dheereyn kartaa ama ka yaraan kartaa iyadoo leh waxyaabo badan ama ka yar.
Tusaale ahaan, mid ka mid ah inta badan wareegyada aasaasiga ah taas oo badanaa la siiyo tusaale ahaan badanaa bateriga, oo leh shid iyo laambad ama mooto. Taasi waa tan ugu aasaasiga ah, halka ay jiraan kuwo kale oo aad u dhib badan, sida rakibaadda korontada ee dhismaha, ama wareegga qalabka elektarooniga ah.
Dabcan, noocan ah wareegga korantada, waxaa jiri doona tiro taxane ah oo xiriir la leh. Kuwa aasaasiga ah ee aan horay u soo bandhignay markaan falanqeyneyno ohm sharciga: danab, xoog iyo iska caabin.
Wareegga elektarooniga ah
Xaqiiqdii waad isweydiineysaa farqiga u dhexeeya korantada iyo korantada, ama inta udhaxeysa wareegga elektarooniga ah iyo wareegga korantada. Mabda 'ahaan, wareegga korantada ayaa loo isticmaali karaa labada xaaladood, in kasta oo markii la cayimay uu ka hadlayo wareegga elektaroonigga ah, wuxuu guud ahaan tixraacayaa wareegyada tooska ah ee hadda jira.
Tusaale ahaan, waxaan ka hadlaynaa wareegga korantada markii aan ka hadlayno rakibaadda korontada ee guriga (talantaalli hadda) iyo mid elektaroonik ah (DC) markaad tixraacayso PC.
Si kastaba ha noqotee, si aad u badan ka sii shub badan:
Korontada: marka socodka socda ay xukumaan jilaayaal gaar ah, sida furayaasha, furayaasha, iwm. Wareegyadan sida caadiga ah ma jiraan xubno firfircoon, kaliya cunsurro falgal ah (iska caabin, kaabaroor, transformer, diode iwm)
Elektaroonig: marka socodka hadda socda uu koontaroolo signal kale oo koronto. Tusaale ahaan, oo leh transistor kaas oo loo adeegsado danab albaab si loo oggolaado ama uusan u sii socon socodka u dhexeeya isha iyo dheecaanka. Taasi waa, si loogu yeero sida oo kale, waa inay ku jirtaa ugu yaraan hal cunsur firfircoon.
Si kale haddii loo dhigo, wareegga elektiroonigga waa midka kaas korontadu waxay awood u leedahay inay xakameyso korantada. Laakiin labadaba waxaa jiri kara waxyaabo kala duwan oo caam ah: transistors, diodes, light light or LEDs, resistors, coils / inductors, capacitors, iwm.
Noocyada wareegyada elektiroonigga ah
ka noocyada wareegyada elektiroonigga ah iyadoo kuxiran sida canaasiirtu u kala taagan yihiin:
Taxanaha: wareeggaas oo laba ama in ka badan oo xamuul ah (guluub, LED, mooto, transistor, ...) ay ku xiran yihiin taxane ahaan midba midka kale, taas oo ah, midba midka kale. Adoo sababaya in durdurku ku dhex maro qaybaha wareegga hal waddo.
Isbarbar socda: xaaladdan waxay noqon laheyd markii qeybaha ay isku xirmaan isbarbar socda. Taasi waa, waxaa jiri doona wadiiqooyin kala duwan oo kuwa hadda socda ay mari karaan. Xaaladdan oo kale, haddii mid ka mid ah curiyeyaasha taxanaha ahi ay joojiyaan shaqada, inta soo hartay waxay sii wadi karaan inay helaan awood.
Isku dhafan: waa kuwa ugu badan ee soo noqnoqda, oo waxay isku daraan labada curiye ee taxanaha ah iyo walxaha isbarbar socda.
Haddaan ka soo qayb galno sidee yahay wareegga ama qaabeynta in korontadu socoto, waxaad ku kala garan kartaa:
Cerrado: waa wareeggaas waddadiisu u saamaxayso wareegga hadda , samaynta qiimaha socodka hadda ku tiirsan culeyska.
Furan: marka ay jiraan cillado cilladaysan ama kaari la gooyay, ama qayb ka mid ah (sida biiro), waxay ka hortagayaan in qulqulka qulqulka uu socdo.
Wareeg gaaban: wareegga gaaban waxaa loo yaqaannaa ifafaalaha ay labada cirif (+ iyo -) midba midka kale ku biiro, taas oo keeneysa in wareegga uu shaqada joojiyo. Tani way dhici kartaa sababta oo ah waxaa jira qayb ka mid ah walxaha wax kala sooca ee u dhexeeya dariiqyada tabinta ama fiilooyinka, maxaa yeelay dahaadhka dahaarka ka qaada korantada ayaa xumaaday, iwm.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » General » Noocyada wareegyada korantada ee hadda jira
Toroidal transformer: wax walboo aad ubaahantahay inaad ogaato
Gears: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxyaabaha ku wareegsan